Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း )
Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
Peptic Ulcer ဆိုတာ အစာအိမ်နှင့် duodenum memberane (အူရဲ့ ပထမဆုံးအပိုင်း) မှာ အနာဖြစ်ခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအနာက အစာအိမ်နှင့် အူနံရံတွေ ပေါက်ရာမှ အောက်ဘက်တစ်ရှူးများ ပေါ်လာပြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ အူထက် ၄ ဆလောက်ပိုဖြစ်ပါတယ်။
Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါက အဖြစ်များပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Peptic ulcer ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါလက္ခဏာ တွေကတော့ ဗိုက်အောင့်တာ သို့ ပူသလိုခံစားရခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နာခြင်းက ချက်နေရာနှင့် ရင်ညွန့်တို့မှာ အဖြစ်များပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အစာအိမ်ဟာ အစာမရှိတဲ့ အခါ အထူးသဖြင့် အစာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား နှင့် ညဘက်တွေမှာ နာကျင်ခြင်း။
နာကျင်ခြင်းက အစာစားလိုက်လျှင် သို့ ပဋိဇီဝဆေးပေးလိုက်လျှင် သက်သာသွားခြင်း
နာကျင်ခြင်းက မိနစ်အနည်းငယ်မှ နာရီပေါင်းများစွာ ကြာနေခြင်း
ရက်ပိုင်း၊ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း နျင့် လပိုင်းအတွင်း ပေါ်လာလိုက် ပျောက်လိုက် ဖြစ်ခြင်း
အစာအိမ်တွင်း မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခု များရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Peptic ulcer က မကုပဲထားလျှင် ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာအောက်ပါအချက်တွေ ရှိနေလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။
အားနည်းခြင်း သို့ နွမ်းနယ်ခြင်း
သွေး သို့ ကော်ဖီရောင် အရည်များ အန်ခြင်း
သွေးရောင် သို့ ဝမ်းမဲမဲသွားခြင်း
ရုတ်တရက် ဖြစ်ပြီး ဆက်တိုက် ဗိုက်အောင့်နေခြင်း
ဒီလက္ခဏာတွေက peptic ulcer ပိုဆိုးလာလျှင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း ) ကို ဘာတွေက ဖြစ်စေသလဲ
Peptic ulcer ကိုအများဆုံးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများမှာ
အစာအိမ်တွင်း Helicobacter ပိုးဝင်ခြင်း
သွေးကျဆေးဖြစ်တဲ့ aspirin သို့ steroid မပါတဲ့ အရောင်ကျဆေးများ (NSAID) ဖြစ်တဲ့ ibuprofen
Zollinger-Elllison Syndrome (အစာအိမ်အက်စစ်ဓါတ်ပိုထုတ်နေခြင်း သို့ အစာအိမ်နံရံပေါက်ခြင်း)
အစာအိမ်၊ အူ သို့ ဘေလုံး ကင်ဆာများ
Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Peptic ulcer ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။ ။ ဆေးလိပ်သောက်တာဟာ H.pylori ပိုးရှိနေတဲ့ လူတွေမှာ peptic ulcer ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
အရက်။ ။ အရက်က အစာအိမ်နံရံကို တိုက်စားခြင်း ဖြစ်စေပြီး အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွားစေပါတယ်။
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများ မရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ peptic ulcer မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာ မှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Peptic ulcer ကို အဖြေရှာအတည်ပြုနိုင်ရန် ဆရာဝန်တွေက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် ဆရာဝန်တွေ က အောက်ပါ စမ်းသပ်မှုတွေလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးစစ်ခြင်း ။ ။ သင့်မှာ သွေးအားနည်းရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း
ဝမ်းစစ်ခြင်း ။ ။ ဝမ်းတွင်း သွေးပါမပါ စစ်ခြင်း။
EGD ။ ။ ဆရာဝန်က ကင်မရာပါတဲ့ ပြွန်ကို ပါးစပ်မှ ထည့်ပြီး အစာအိမ်နှင့် အူနံရံများအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း။
Dudenum X ray ။ ။ ဆရာဝန်တွေက သင့်ကို limiting light bari ဆိုတဲ့ အရာကို သောက်ပြီးနောက်မှာ အူကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Peptic Ulcer (အစာအိမ်( သို့) အူ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ အနာဖြစ်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှု ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အနာပျောက်ကင်းပြီး ပြန်မဖြစ်နိုင်အောင်နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ တွေမဖြစ်အောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာတွေက ကုသပြီးနောက် ၂ ပတ်အတွင်း ပြန်သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေက ကြာမယ်ဆိုလျှင် ရောဂါကလည်း ကြာနိုင်ပါတယ်။
ကူသမှုက ဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ် အက်စစ်လျှော့ချပေးတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ antacid ၊ histamine receptor inhibitors H2 တွေဖြစ်တဲ့ ranitidine၊ famotidine သို့ တခြား proton pump inhibitors တွေဖြစ်တဲ့ omeprazole ဆေးတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ Sulcralfate ကတော့ အနာကို ကျက်စေတဲ့ အကာကွယ်ပေးပါတယ်။ H.pylori ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် တော့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ၊ proton pump inhibitors သို့ bismuth တွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ peptic ulcer ကိုဖြစ်စေတာက steroid မပါတဲ့ အရောင်ကျဆေးတွေဖြစ်နေလျှင် ဆရာဝန်က အောက်ပါတို့ကို လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
သုံးတဲ့ ပမာဏကို လျှော့ပါ။
Proton pump inhibitor သို့ histamine receptors inhibitors တွေ သုံးပါ။
အကယ်၍ ဆေးတွေက မထိရောက်တဲ့ အခါ သို့ ဆေးတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာလျှင် ခွဲစိပ်နိုင် ရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ခွဲစိပ်ခြင်းကိုတော့ ယနေ့ချိန်ထိ မလုပ်ရသေးပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Peptic ulcer ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Peptic ulcer ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• Peptic ulcer အဖြစ်များစေတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တဲ့ NSAID, Aspirin , ဆေးလိပ်သောက်ခြင် နှင့် အရက်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။
• ဝမ်းလျှောနေလျှင် ဆရာဝန်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
• သွေးအန်ခြင်း ကော်ဖီရောင် သလိပ်ထွက်ခြင်းတို့ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
• သင့်ရဲ့ ဝမ်းမှာ သွေး သို့ အမည်းရောင်ဖြစ်နေလျှင် ဆရာဝန်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
• သင်အားနည်းလျှင် သို့ ဖြူဖျော့နေလျှင် ဆရာဝန်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
• ကုသမှုတွေက အရာမရောက်လျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
• ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီး သစ်စေ့တွေကို စားပြီး စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုလျှင် လက္ခဏာတွေပိုဆိုးစေခြင်းမှ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Porter, Robert. Kaplan Justin. Homeier Barbara.The Merck manual home health handbook. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2009. Print edition. Page 139
Peptic Ulcer.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peptic-ulcer/basics/definition/con-20028643. Accessed Jul 14 2016
Peptic Ulcer Disease.http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/peptic-ulcer-disease-topic-overview. Accessed Jul 14 2016
What I need to know about Peptic Ulcer Disease.http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/peptic-ulcer/Documents/WINTKA-PepticUlcers_508.pdf. Accessed Jul 14 2016